a - TECHNOMANIAC's - BLOG: June 2007
Hello to i-p-h-o-n-e! & iDAY!!
(In SG, it's 30th. US is still 29th)
၂၉ ရက်နေ့ ပါ။ အမေရိကားရဲ့  hyper-hype နေ့တွေထဲက ၁ရက်ဖြစ်သွားပါပြီ။ iDay တဲ့။
ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်တွေမှာ စာမရေးနိုင်တာ စာမေးပွဲကြောင့်တင်မကပါဘူး။ ဒီကောင် ... အုိုင်ဖုန်းကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ တနေ့ကို ဘလော့ခ် ၅ခု အနည်းဆုံး လိုက်ဖတ်ပါတယ်။ ၀င်း 95 ပြီးကတည်းက အကြီးဆုံး လူထုကို ဂယက်ရိုက်စေတဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်လကတည်းက အမြည်းရထားတဲ့ လူတွေဟာ နေ့နေ့ညည အိုင်ဖုန်းအကြောင်းကို ပြောနေကြပါတယ်။ ဝေဖန်မှုတွေ၊ ချီးမွမ်းမှုတွေ အဖက်ဖက်က အပစ်အခတ်မရပ်စဲခဲ့သလို ဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူ၊ စီးပွားရေးပညာရှင်၊ လူထုစိတ်ပညာလေ့လာသူတွေကလည်း နေ့ညမပြတ်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။ APPL ရဲ့ စတော့ခ်ကလည်း တမဟုတ်ချင်းထိုးတက်သွားလို့ အမေရိကန်စီးပွားရေးလောကမှာ လှုတ်ခတ်နေတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ တခြားဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ဗဏီတွေဖြစ်တဲ့ နိုကီယာ၊ ဆမ်ဆောင်း၊ ဘလက်ခ်ဘယ်ရီ၊ အယ်လ်ဂျီ တို့လည်း နေမထိထိုင်မသာ လှုပ်လှုပ်ရွရွတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာ၊ လေးစားတာ ၁ခုက Apple ရဲ့  Marketing ပါ။ ကျွန်တော်က ဈေးကွက်ဂုရုမဟုတ်တော့ technically သိပ်တော့နားမလည်ပေမဲ့၊ လူပြိန်းအတွေးနှင့်တောင် ဒါကမြင်နိုင်ပါတယ်။ Apple အောင်မြင်တာဟာ လူတွေဘာကို လိုသလဲ၊ လူတွေရဲ့  demands, သူတို့ခံစားနေရတဲ့ နေ့စဉ်အခက်အခဲ၊ သူတို့ရဲ့  အပြုအမူ ဒါတွေကို သေချာ Research လုပ်၊ ပြီးရင် ထုတ်မဲ့ ပရောဒတ်ကို ဖြစ်နိုင်သမျှ Perfect ( of curse, nothing is perfect, but standard is perfect ) ရောက်အောင် စီစဉ်ပြီးမှ ထုတ်ရောင်းလို့ လို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်၊ ခြောက်လစောပြီး ပစ္စည်း ၁ခုကို ကြေငြာတယ်ဆိုတာ အားအားယားယား ကြွားဖို့လို့ ကျွန်တောမထင်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့  Customer အပေါ်မှာ အမြဲလေ့လာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ အဖွဲ့ ၁ဖွဲ့ဟာ အင်မတန်မှ စေ့စပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ နာမည်ကြီး ပန်းသီး ဖိုရမ် မှန်သမျှကိုလည်း သူတို့လိုက်မဖတ်ဘူးလို့ မထင်ပါနှင့်။ အကုန်သိပါတယ်။ လူတွေဆဲပြီ ဆိုတာနှင့် အဲ့ဒီအဖွဲ့ခေါင်းခဲတာပါပဲ။ Branding, Customers' Values, Icon ဖြစ်မှု အရာအားလုံးကို သူတို့ သိပ်အလေးအနက်ထားပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးမော်ဒယ်၁ခုကို လူတွေဆီက ထောက်ခံချက်ကို အမြဲရယူပြီး တည်ဆောက်ပါတယ်။ အိုင်ဖုန်းကိုပဲကြည့်ပါ။ ပရိတ်သတ်သန်းဘယ်လောက်ချီနေလဲဆိုတာ။ ကျွန်တော်ဟို စကားတစ်ခွန်းသတိရတယ်။ သင့်အနောက်မှာ လူတစ်သန်းရှိရင် ဘာလုပ်လုပ်အောင်မြင်တယ်တဲ့။ သိပ်မှန်တာပဲ။ အဖွင့်နေ့တင် သန်း၂၀၀ ရမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
အဲ့တော့ အပေါ်က အပိုဒ်မှာ ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ အဓိကအချက်တွေက ( ပျောက်သွားမှာစိုးလို့၊ ဟီး) သူတို့ရဲ့  လူထုအပေါ်ဂယက်ရိုက်နိုင်စွမ်းကြီးမှု၊ မားကတ်ကို နားလည်ပြီး၊ နာမည်၁လုံးကို သိပ်တန်ဖိုးထားမှု တွေပါ။ ထားပါတော့။ အခုဖြစ်နေတာ အိုင်ဖုန်းဆုိုတော့ အဲ့ဒီချာတိတ်အကြောင်းကြည့်ရအောင်။ စထွက်တယ်၊ လူတွေကြိုက်တယ်၊ ပစ်စလက်ခတ်ဝေဖန်တယ်၊ ကျရှုံးမယ်ဘာညာ နှင့်။ ခုတော့ Apple က အိုင်ဖုန်းနှင့် လူတွေကို ကျီစားပါတယ်။ အရင်တုံးက မကောင်းဘူးပြောထားတဲ့ လူတွေပါးစပ်ပိတ်သွားအောင် နေ့တိုင်းလိုလို features အသစ်တွေထုတ်ပြပါတယ်။ လူတွေဘာမကြိုက်သလဲ၊ အဲ့ဒါကိုရအောင် ပြင်ပြပါတယ်။ ဒီလိုနှင့် ဒီနေ့ထွက်မဲ့နေ့ ရောက်လာပါပြီ။
အိုင်ဖုန်းဟာ သူတို့ ပြောသလို နည်းပညာကိုတော်လှန်လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဘာကြောင့် အောင်မြင်မှာလဲဆိုတာကို ကျွန်တော့်ကိုမေးရင် ရှင်းရှင်းလေးပါ။ အဲ့ဒီ features တွေဟာ လက်ရှိဖုန်းတော်တော်များများမှာပါပါတယ်၊ သို့သော် အိုင်ဖုန်းက အဲ့ဒီ Features တွေကို လူတွေနှင့် အရင်းနှီးဆုံးဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ရှိရင်းစွဲ features တွေ အပြိုင်အဆိုင်၊ သုံးရခက်တဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ကို အပြိုင်ဆိုင်ထုတ်နေတဲ့ လက်ရှိ မားကတ်ဟာ ဒီလိုဒီလိုပဲဖြစ်နေခဲ့တာကြာပါပြီ။ Innovation Driven Market ၁ခုကို အမြဲထိုးဖောက်ချင်လေ့ရှိတဲ့ Apple ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ consumers တွေ အတွက် ရွေးချယ်စရာ၊ ပြောင်းလဲမှု အမြင်တွေ ပွင့်သွားပါတယ်။ ဒါကိုပဲ လူတွေကလည်း ကြိုက်ကြတာပါ။
အခုဆို အမေရိကန်မှာ အိုင်ဖုန်း ၀ယ်ဖို့ တန်းစီတဲ့ လူတွေ မနည်းပါ ရာချီနေပါတယ်။ Philadelphia မြို့တော်ဝန်လည်းပါတယ်။ ပဲရစ် ဟီလ်တန်ကလည်း ထောင်ထဲကနေ ၁လုံးဝယ်ဖို့ မှာထားတယ်။ George W Bush တောင် လူငှားပြီး ၀ယ်ရင်ဝယ်ခိုင်းထားမှာ ပြောလို့မရဘူး။ =P တန်းစီပေးဖို့ သက်သက်တင် ၁နာရီ ၁၅ကျပ်ရတယ်ဆိုပဲ ၊ မဆိုးဘူးပဲ Part-Time လုပ်ရတာ။ NYC တွေ အိုင်ဖုန်းကို ရူးသွတ်ပုံကတော့ စာဖွဲ့ရင် အတော်ရှည်သွားပါလိမ့်မယ်။
အဲ့တော့ ကျွန်တော်လည်း ခေတ်နှင့်အမီ အိုင်ဖုန်းရောဂါထနေပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ မနေ့တနေ့ကမှ ၀ယ်ထားတဲ့ O2 Windows Mobile 5-point-ohh! ဖုန်းကို ကြည့်လိုက်၊ ဟိုက ကြော်ငြာထဲက iPhone ကိုကြည့်လိုက်နှင့်၊ အင်း SmartPhone ခြင်းတူတာတောင်မှ ငါ့ဟာက အင်မတန် ကျက်သရေတုံးသပဲလို့။ စိတ်ကြီးရယ်ကိုညစ်ရပါတယ်ဗျာ။
အဲ့အဲ့.. သတင်းထူးလေးများ မှတ်သားသွားပါဦး။
- iTunes 7.3 ဒီနေ့ထွက်ပြီတဲ့။
- Apple က သူရဲ့ အိုင်ဖုန်း page မှာ Finger Tips Videos တွေထပ်တင်လိုက်တယ်။
- Steve Jobs က သူ့  ရဲ့  US Full Time, Part Time Staff တွေအားလုံးကို အိုင်ဖုန်း အလကားပေးမယ်တဲ့။
- New Macs and WideScreen/TouchScreen iPod တွေထွက်ဖို့ရှိပါတယ်တဲ့။
- iPhone Accessories & Prices တွေ ထွက်ပါပြီ။
- AT&T ရဲ့  EDGE နက်ဝက်ခ်တွေ နေ့ချင်းညချင်းမြန်ကုန်ပါပြီ။ အိုင်ဖုန်း အင်တာနက်ကိုနှေးတယ်ပြောလို့ ။ ဒါပေမယ့် HSPA ကုိုတော့ မမှီသေးဘူးပေါ့ဗျာ။
ဒီလောက်ပါပဲ။ အမေရိကားက အကိုတုို့ အမတို့ကော ဘာတွေ မြင်နေရသလဲ။ Manhattan မှာ စည်မှ စည်ကားရဲ့ လားဗျာ။
Posted by Wai Phyo at11:18 PM0comments
Ratatouille - Singapore Release Date is not June 29! .. Gash!
Well, it's pretty weird to find out that Ratatouille will be at SG only in August ( i tink on 30th, but I didn't care as just I realized that it's not on time here). What's the point of that, guys? It's, again, justaRat and cartoon film. According to my knowledge, it isn't supposed to be late due to Censor Board because all Cartoon Movies hardly need censor certificate. Phew, but who knows?
Probably, there might be other problems with Pixar or filming organizations here. Yet I still feel unhappy to see that all the SG Cinemas are focusing on Die Hard and other fresh releases. ( Oops, no disrespect to those Movies, anyway :P )
Let's hope. And please don't forget to buzz me why it is late in SG.
Posted by Wai Phyo at1:23 AM0comments
Ratatouille is on JUNE 29! + More Pixar's Productions
ကျွန်တော် Apple တင် မကပါဘူး Pixar ရဲ့ fan လည်းဟုတ်ပါတယ်။ =P
ကွန်ပျူတာ Animated Film တွေကို ပထမဆုံး ကမ္ဘာကို ပြခဲ့တဲ့ ကုမ္ဗဏီဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့မြင်နေရတဲ့ CG ရုပ်ရှင် တွေကို Apple CEO Steve Jobs နှင့် အပေါင်းအပါတွေက Toy Story, Bug's Life, Incredibles စတာတွေနှင့် လူတွေသိစေခဲ့ပါတယ်။ ရိုက်လိုက်တဲ့ ကားတုိုင်းကလည်း ၀င်ငွေ သန်းရာချီပြီး အမေရိကန်ရုပ်ရှင်လောကရဲ့  ၀င်ငွေအကောင်းဆုတွေ အလီလီဆွတ်ခူးထားပါတယ်။
အခုလည်း ကျွန်တော်တို့ စောင့်မျှော်နေတဲ့ Ratatouille လာပါပြီ။ Trailer ကြည့်ရတာတော့ ရင်သပ်ရှုမောပါပဲ။ ကြွက်၁ကောင်ရဲ့ ပြင်သစ်ပြည်က ဘ၀ကို လူတွေနှစ်ခြိုက်အောင် ရေးနိုင်တာ Brad Bird အပါအ၀င် Pixar က ဂျီးနီးယပ်စ်တွေ တော်လွန်းပါတယ်ဗျာ။ အလင်းအမှောင် သဘောသဘာဝ၊ ကင်မရာရှုထောင့်၊ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့  အသက်ဝင်မှုကိုမြင်ရတာ ကျွန်တော် next generation ကာတွန်းကားတွေရဲ့ အောင်မြင်နိုင်စွမ်းကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သွားတယ်။ iPhone ရဲ့  Release Date နှင့်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ၁ရက်ထဲပါပဲ။ Steve လက်ချက်လားမသိပါ။
ထားပါတော့လေ။ ကျွန်တော် Pixar ရဲ့ Timeline လေး ၀ီကီ ကနေ ကော်ပီကူးထားပါတယ်။ ၁ခုချင်းစီ နှိပ်ပြီး လေ့လာကြည့်ပါ။ ကာတွန်းကားဆိုတာ ကလေးကားမဟုတ်တော့ပါဘူး။ တခါတရံ လူတွေရဲ့  စရိုက်ကို ပြချင်တဲ့အခါ ကာတွန်းတွေက ပိုပြီးထိရောက်၊ အသက်ပါပါတယ်။ ဥပမာ၊ ခင်ဗျားတို့ မကြိုက်တဲ့ မင်းသားပါတဲ့ ရုပ်ရှင်ဆို မကြည့်ချင်ဘူး မဟုတ်လား၊ ဇာတ်လမ်းဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း။ ကာတွန်းကားကြတော့ ပြီးရော၊ မုန်းစရာ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ စရာ တွေ ကင်းသွားတယ်။ ဇာတ်လမ်းလည်းကောင်း၊ ဟာသလည်းစွက်၊ အချစ်၊ အလွမ်း၊ အက်ရှင်လည်း ငြိမ်းအောင် ရေးထားတော့ ကြည့်ရတာစိတ်ချမ်းသာပါတယ်။
ကျွန်တော် တစ်ခါက ထင်ဖူးပါတယ်။ Walt Disney ကသာ Pixar ကို မ၀ယ်ဘူးဆိုရင် ဟောလီးဝုဒ်မှာ Animation လောက ကို Pixar ပဲ ကြီးစိုးသွားနိုင်တယ်လို့၊ အင်း... အခုလည်း ဘာမှ မထူးပါဘူး၊ Disney ရဲ့  Animation Production, Movies Sequel, Directing, Scripting အားလုံးကို Pixar လက်ထဲ အပ်ထားရတာပါပဲ။ Steve Jobs က CEO ဖြစ်၊ Disney ရဲ့  အကြီးဆုံး Individual Shareholder ဖြစ်နေပြီ။ CCO John Lasseter ကိုလည်း Disney ကလက် လွှတ်လို့ မရ၊ အင်း .. Pixar ရဲ့ အနာဂတ်ကတော့ ကောင်းနေတယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျာ။
.. စကားမစပ် .. Pixar Production က မက်ကင်းတော့ရှ် ကွန်ပျူတာ တွေ သုံးတယ်ဆိုပဲ .... =P
အောက်က အချက်လေးတွေ လေ့လာဖို့ စုဆောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Ratatouille ကိုလည်း ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်လိုက်ဦးဗျိုး။
Quick Look on Pixar's Timeline
Toy Story (1995) • A Bug's Life (1998) • Toy Story2(1999) • Monsters, Inc. (2001) • Finding Nemo (2003) • The Incredibles (2004) • Cars (2006) • Ratatouille (2007) • WALL-E (2008) • Up (2009) • Toy Story3(2010)
Posted by Wai Phyo at1:21 AM0comments
Gmail Widget Fix + Safari3Bugs !
Safari3သွင်းပြီး Gmail Widget အလုပ်မလုပ်တော့တဲ့အခါ အောက်ပါ နည်းလမ်းများကို လုပ်ဆောင်ပါ။ =P
1) Go to (ur Home Folder)/Library/Widgets/ and right click on Blogger.wdgt > Show Package Contents.
2) Locate the file BloggerWidget.css, open the file using ur favourite text editor.
3) Once u see CSS codes, find the line -
< input id="search" type="search" results="10" placeholder="Search Mail" onsearch="Frontside.onSearch()" size="17" >
4) Then comment it out using < !-- ..... -->
5) Done... Refresh your widget using Cmd+R .... =)
All credits go to Fellows from Google Mac Widgets Group ...
တခြား widget တော် တော် များများလည်း အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ Safari3ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် WebKit Engine ကြောင့် လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Leopard ရဲ့ Widget တွေကတော့ လှနေတာပါပဲ။ .... Beta simply means "things may work or may not work" , huh ? =P Let's see ~
Posted by Wai Phyo at10:29 PM0comments
Yay! New Blogger Widget
I'm so happy to get updated blogger widget! Didn't know that it was released on 4th June. Coolz, now mi blogging life is refreshed again :P
Posted by Wai Phyo at11:14 AM0comments
It's out , finally !
ဇွန် ၂၉ မှာ အိုင်ဖုန်း ထွက်တော့မယ်တဲ့။ ဇွန် ၁၁ မှာ ကျင်းပမဲ့ WWDC 07 မတိုင်ခင် အမှီ ကြေညာလိုက်တယ်။ မနေ့က Apple Website မှာ ကြော်ငြာ အသစ် သုံးခု တင်ထားတာတွေ့လိုက် ရပါတယ်။ အောက်က လင့်ခ်မှာ ကြည့်ကြပါ။ =P
Posted by Wai Phyo at11:28 PM0comments
Triple OS 'es and Me
ကျွန်တော် မနေ့က VMWare Fusion Beta ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ ရလိုက်တယ်။ VMWare ရဲ့  အသစ်ထွက်တဲ့ Version ပါ။ Mac Users တွေ အတွက်ပါ။ အဲ့ဒါနှင့် အဲ့ဒီကောင်ကို သွင်းပြီးပြီးချင်း ကျောင်းက လင့်ခ်ပေးထားတဲ့ SUSE Linux9Vmx/vmdk ဖိုင်တွေဒေါင်းလုပ်ထပ်လုပ်ပြီး Run ကြည့်လိုက်တယ်။ ဂွတ်ရှယ်။ Mac ပေါ်မှာ Linux Run ရတာ စိတ်အချမ်းသာဆုံးပဲ။ မြန်မှမြန်၊ စတင်တင်ချင်းတော့ အဲ့ဒီ VM က ဂရပ်ဖစ် settings တွေ မမှန်လို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ 1280x800 Resolution မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ နောက် ကျွန်တော်ရယ်၊ သန့်ဇင်ရယ်၊ ဝေယံရယ် သုံးကောင်သားပေါင်းပြီး VMWare tools သွင်း၊ ပြန် ကမြင်းလိုက်တာ ကောင်းသွားတယ်။ Screen pitch မှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါတောင် X-Server ကို Restart တော့ ၂ ခါ လောက် ချလိုက်ရသေးတယ်။ x(
ကျွန်တော်က လက်ရှိ Windows XP Pro ( အော်ရီဂျင်နယ် လိုင်စင်နော် .. ဟင်းဟင်း ) ကို Parallesl Desktop Mac နှင့်လည်း သုံးနေတာပါ။ အရင်တုံးကတော့ Bootcamp နှင့် Windows သုံးတယ်။ ဟုိုတလောကမှ ပြောင်းလိုက်တာ။ အဲ့ဒါနှင့် ကြုံတုံး မထူးပါဘူးဆိုပြီး Windows လည်း ကောက် Run၊ OS သုံးခုတက်နေတုံး Screenshot ရိုက်ထားလိုက်တယ်။ အောက်မှာကြည့်ကြပါ။
သတိပြုရန် တစ်ချက်မှာ Windows ၏ အင်မတန်မှ ကျက်သရေတုံးမှု ကြောင့် ကျွန်တော့် Host OS ဖြစ်တဲ့ Mac OS X လည်း အတော်နှေးသွားပါတယ်။ တခြား Guest OS - SUSE ကိုလည်း ဒုက္ခိတ ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ သနားစရာ သူ့ခမျာလည်း ကိုယ်တိုင် မကောင်းတာတောင် ဘာလို့ ပတ်ပတ်လည် နှိပ်စက်သွားလည်း မသိဘူး။
[Click to view larger image.]
My Disclaimer : အထက်ပါပုံမှာ Photoshop'ed Image မဟုတ်ပါ။ ယနေ့ အချိန်ထိ Operating System သုံးမျိုးလုံး၊ ဒါမှမဟုတ် OS ပေါင်း သုံးခုထက်မက တပြိုင်တည်း Run နိုင်တာ Mac OS X တစ်ခုပဲရှိပါသေးတယ်။ Mac က သူ့ OS ကို Win ပေါ်မှာ ပေးမသုံးတဲ့ အချက်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ Win ရဲ့  Memory allocation ကိုက သိပ် အစားပုပ်နေလို့ပါ။ XP အပေါ်မှာ နောက်ထပ် Vista1ခု၊ Linux Distro ၁ခု တင်ဖို့ဆိုတာ၊ Windows' Virtualization Software Developer တွေ အတွက် Nightmare 1 ခု ဖြစ်နေပါတယ်။
အခု Vista Business ကို Bootcamp နှင့် ထပ်တင်ဖုို့ ကြိုးစားနေတယ်။ ဟီးဟီး အလကားရထားတဲ့ Genuine လိုင်စင်ကြီးကို. ...
"Related Links" - Thant Zin Oo Wai Yan
Posted by Wai Phyo at1:59 AM0comments
Summarized Words of D5
မနေ့ညကတော့ လင့်ခ်တင်လိုက်တယ်။ ခုတော့ detailed info လေးပါ။
+ Apple's Jobs က YouTube ကို Apple TV မှာ ထည့်ပြီး Integrate လုပ်ပေးပါ့မယ်တဲ့။ နောက်လမှာ ထုတ်မဲ့ System Software Upgarde မှာ ရပါမယ်။ (Ed.note: ကျွန်တော်လည်း AppleTV ၀ယ်ချင်လာပြီ။)
+ နောက်ပြီး၊ အိုင်ဖုန်း ကို Third party developer တွေ ၀င်ရောက်ပြီး ရေးနိုင်အောင် လမ်းဖွင့်ပေးပါ့မယ်တဲ့။ လောလောဆယ်တော့ စဉ်းစားနေတုံးပါတဲ့။
+ iTunes ကနေ HD movies တွေ ရောင်းချင်ရောင်းမယ်တဲ့။ နောက် လ အနည်းငယ် အတွင်းမှာ။
+ iTunes Plus က Download သမားတွေအတွက် ခိုးကူးရတာ မလွယ်ဘူးလားလို့ Walt က မေးတဲ့အခါ၊ မယုံရင်စမ်းကြည့်ပါတဲ့။ AAC's meta info ထဲကို ခင်ဗျားပိုင်ရှင်ရဲ့  နာမည်၊ ဘာညာ အကုန် မြုပ်ပေးလိုက်တယ်။ လွယ်လွယ်နှင့်ရှယ်ချင်ရင် အဖမ်းခံရဖို့လွယ်ပြီး ထောင်ထဲ ကို ဒိုက်ရိုက်ပဲတဲ့။
+ သူကပြောတယ်၊ 3G network ကို အယုံအကြည်မရှိပါဘူးတဲ့။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက လူတွေ၊ တကမ္ဘာလုံးက လူတွေ လိုချင်တာက အင်တာနက် အစစ်ပါ။ လက်ရှိဖုန်းတွေက ဘေဘီအင်တာနက်လေးတွေပဲ ပေးနိုင်တာပါတဲ့။ ( Ed. note: Darn right ဗျာ။ )
+ သူကထပ်ပြောတယ်၊ iPhone သည် the best iPod ever made ပါပဲတဲ့။ Walt က မေးသေးတယ်။ ခင်ဗျား iPhone ဘာလို့ အောင်မြင်မှာလဲတဲ့။3ချက်ပဲရှိပါတယ်။ အကောင်းဆုံး music device ၊ အကောင်းဆုံး internet experience ၊ အကောင်းဆုံး Operating System တွေ ပါလို့ပါတဲ့။
+ AppleTV အသစ်လည်း ၀ယ်လို့ရပါပြီတဲ့။ 160GB ကို 399$ နှင့်ပါ။
+ မိုက်ကရိုဆော့ဖ် နှင့် လက်တွဲပြီးလုပ်လာတာ နှစ် ၂၀ ကျော်ပြီဖြစ်လို့လည်း ၀မ်းသာပါတယ်တဲ့။
+ iTunes ဆော့ဖ်ဝဲက iPod အလုံးရေထက် ဘယ်နှစ်ဆများလဲလို့ မေးတော့ အဆပေါင်းများစွာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်ထိ iTunes ဆော့ဖ်ဝဲကို သန်း ၄၀၀ ကျော် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးဖြန့်ချိပေးသွားပါပြီ။
+ ကုမ္မဏ္ဏီ ရဲ့  လက်ရှိ NASDAQ မှာ ပေါက်ဈေးက 100 Billion ကျော်သွားပါပြီ။ ၁ စတော့ခ်ကို ဒေါ်လာ ၁၅၀$ လို့ Morgan Stanley ကုမ္မဏီကြီး က ခန့်မှန်းပေးလိုက်ပါတယ်။
+ ကျွန်တော်ပဲ သေချာနားမထောင်လို့လားမသိဘူး၊ သူတို့ ပြောသွားတဲ့ အချက်မှာထင်ရှားတာ၁ခုပဲရှိတယ်။ အဲ့ဒါက Personalization ပါ။ အင်တာနက် services တွေမှာ Personalization သည် အသက် လို့ Schmidt ( CEO , Google Inc. ) က ပြောသွားပါတယ်။
+ မယုံရင် iGoogle ကို ကြည့်ပါတဲ့။ Personalization အကြီးကြီးပါပါတယ်တဲ့။ အသုံးပြုသူရဲ့  different experiences တွေ ပေါ်မှာ အခြေခံထားပါတယ်။ ( Ed.Note: လန်ထွက် )
+ DoubleClick, YouTube ကို ၀ယ်ပြီးတဲ့အခါ ခင်ဗျားကုမ္မဏီ က Ads, Technology, Serach သုံးမျိုးထဲက ဘယ်ဟာလဲ။ ဒါမှမဟုတ် Hybrid လားတဲ့။ ဘာမှသူပြန်မပြောသွားဘူး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း။ တန်တန်!!
+ Steve Ballmar ( CEO, Microsoft ) က တစ်ဦးတည်း Session ပြောသွားပါတယ်။ သူကတော့ ပွဲ တစ်ပွဲလုံးကို Surface နှင့် ကိုင်လှုပ်သွားတယ်။ Surface ဘာလည်း ကျွန်တော် မပြောတော့ဘူး။ ကျွန်တော့် ဥာဏ်သေးသေးနှင့် ကင်ပွန်းမတပ်ချင်ဘူး။ အဲ့တော့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်သုံးဆောင်ပေတော့။ ဟောဒီကနေ။ အမ်း.. ဒီကောင်က မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ရဲ့  တစ်သက်မှာ ပထမဆုံးလုပ်ဖူးတဲ့ Cool Appliance လို့ ပြောလို့ရမယ်။ ရှယ်လှတယ်။
+ Chen နှင့် Hurley တို့ရဲ့  Session ပါ။
+ Chen က သူတို့ရဲ့  YouTube ကို platform အသွင်နှင့် Mobile Devices တွေ၊ Living Room တွေမှာသုံးလို့ရအောင် လုပ်နေကြောင်း အလေးအနက်ပြောသွားတယ်။
+ YouTube က User Based System ဖြစ်ပြီး၊ Content တွေက့ User Generated Items တွေဖြစ်တာကြောင့် ၊ နေ့တိုင်းလိုလို တရားရုံးက တရားစွဲစာ လာကြောင်း၊ အဲ့ဒါတွေ ဒိုင်ခံရှင်းရတာကလည်း ပြဿနာ တစ်ခုဖြစ်နေကြောင်းပြောသွားပါတယ်။
+ Apple TV မှာ YouTube တွေ တင်မယ်ဆုိုတော့ Video တွေကို ကွာလတီ မြှင့်မလား မေးတော့ အဲ့ဒါကလည်း သူတို့မှာ Full Control မရှိပါဘူးတဲ့။ ကံကောင်းတာ ၁ခုက နောက်ပိုင်း ဗီဒီယိုတွေရဲ့  ကွာလတီတိုးတက်လာမှု၊ အဲ့ ၁ ချက်ရှိပါတယ်တဲ့။
+ နောက်ပြီး Hurley က ထပ်ပြောပါတယ်။ Advertising & Entertainment ကို ပေါင်းစပ်ဖို့ ဟာလည်း စိန်ခေါ်မှု ၁ခုပါပဲတဲ့။ ကြော်ငြာတွေ ဟာ ဖျော်ဖြေမှုတွေ များများ ပေးနိုင်လာတဲ့နှင့် အမျှ Users တွေကလည်း Click နေ မှာပါတဲ့။ ( Ed. Note: လဒလေးတွေ၊ ဂူဂယ် လေသံ လုံးလုံး ဖြစ်သွားပြီ။ =D )
+ Palm က Foleo ဆိုတဲ့ Mobile Companion ဆိုတဲ့ လက်တစ်ထွာသာသာ ကွန်ပျူတာ ပြားပြား ၁လုံးထုတ်ပါတယ်။ Linux Based OS သုံးထားပြီး သူ့ရဲ့  Palm PDAs တွေနှင့် အင်တာနက်၊ အီးမေးလ်၊ စာစီစာရိုက် စတာတွေကို တွဲဖက်ပြီး ခပ်မြန်မြန်လုပ်နိုင်အောင်ဆိုပါတယ်။ တညိုးဂျီးပါပဲ။
+ တခြား Time Inc. က Ann Moore တို့၊ Cisco က John Chambers တို့လည်း အသီးသီးပြောသွားပါတယ်။ လိုက်မမှတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ =(
အင်း... Cupertino, Redmond, East Coast, Mount View .... တို့မှာ လူတွေ တ၀ုန်းဝုန်းနှင့် ရှုပ်နေပြီကြားတယ်။ .... =}
Posted by Wai Phyo at5:45 PM0comments
Great D5: AllThingsD - Don't miss it!
ကျွန်တော့် Gtalk မှာ တင်တင်ထားတဲ့ Event ကြီးခုတော့ရောက်လာပြီ။ မေ ၂၉ ကနေ၊ မေ ၃၁ ထိ Wallstreet Journal က နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကြီးမှုးကျင်းပနေတဲ့ Industry leading ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့  Conference/Keynote ပါ။ Steve Jobs , Steve Ballmar, George Lucas, Ann More (Time Inc), John Chambers (Cisco) တို့ရဲ့  Individual sessions တွေနှင့်အတူ ပရိသတ်အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Jobs & Gates ခေါင်းချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးခန်းတွေကို ဟာသနှောပြီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ ဗီဒီယိုပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် ကို Live upload လုပ်ပေးထား(နေ)ပါတယ်။ Google, Facebook, Palm တို့ရဲ့  Industry ပေါ်မှာ ဘယ်လို အမြင်ရှိလဲဆိုတဲ့ အင်တာဗျူးတွေလည်း ပါဝင် အားဖြည့်ထားတာကြောင့် ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ကြဦးဗျို့။ အောက်က Main Website Link မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ဆက်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဗျို့ ။
Posted by Wai Phyo at3:29 AM0comments
iTunes Plus + 7.2 + Fair Use = Kick out DRM
Apple ရဲ့  မေ ၃၀ update က စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ iTunes 7.2 ပါ။ QT security flaw တွေကို ပြင်ထားပြီး ......... iTunes Plus ကို ဒိုက်ရိုက် Support လုပ်ပါပြီ။ iTunes Plus ကို မတိတေးတဲ့လူတွေ အတွက်ကတော့ ..... ဟမ်း. ..... iTunes Plus ဆိုတာ Apple ရဲ့  နောက်ဆုံး DRM - Free ကို Support ထားတဲ့ Music store ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် iTunes က သူ့ အတိုင်းရှိနေပါမယ်။ တချိန်ထဲမှာပဲ iTunes Plus ကလည်း သီချင်းတွေ ရောင်းပါမယ်။ DRM free ပါ။ အဲ့ဒီက ၀ယ်ပြီးရင် ဘယ်စက်မှာမဆို ကော်ပီတင်ကူးလို့ နားထောင်လို့ရပါမယ်။ အရင်တုံးကလို အိုင်ပေါ့တစ်လုံး၊ ကွန်ပျူတာတစ်လုံး ဆိုတဲ့ ကန့်သန့်ချက်တွေ မရှိတော့ပါဘူး။ Fair Play လို့ခေါ်ခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီ restriction ကြီးကိုဖျက်ပြီး Fair Use ဆိုပြီး ကင်ပွန်းတပ်ပါတယ်။ တခြား MSN music, AOL music တွေ၊ သီချင်းရောင်းတဲ့လူတွေကတော့ DRM နှင့် ဆက်နှိပ်စက်နေတုံးမှာ Apple က သူ့သီချင်းတွေအားလုံးကို DRM-Free ဖြစ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်။ အခုဆို iTunes Plus ကနေလည်း ၀ယ်လို့ရပါပြီ။ ၁ပုဒ်ကို ၁.၂၉ ဒေါ်လာ ထက် နည်းမယ်ဆိုပဲ။ အဲ့.. အဲ့.. အရင်တုံးက iTunes က ၀ယ်ထားတဲ့ သီချင်းတွေရှိရင်လည်း ၁ပုဒ်ကို ပြား ၃၀ ပေးပြီး ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ DRM-Free musics တွေ ဟာ ကွာလတီ အားဖြင့်လည်း ကောင်းပါတယ်။ ၂၅၆ ဘစ် ရှိတဲ့ AAC တွေပါ။ =) ကျွန်တော်တော့ iTunes Singapore လာမှပဲ ၀ယ်တော့မယ်ဗျာ။
Posted by Wai Phyo at2:16 AM0comments
Ratatouille - Singapore Release Date is not June 2...
Ratatouille is on JUNE 29! + More Pixar's Producti...